Fitroarana Sodana: sit-in ao Nertati, ny onja vaovao · Global Voices teny Malagasy
'Nertati avokoa izahay rehetra'
Voadika ny 17 Septambra 2020 6:10 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, عربي, English
Mpanao fihetsiketsehana an'aivony manao sit-in ao Nertati, Darfur Afovoany, Sodàna, hanao fitakiana hisian'ny filaminana sy ny fandriampahalemana ao amin'ny faritra, 3 Jolay 2020. Pikantsary avy amin'ny tatitra nataon'ny Sudan YouTube.
Raha mbola manohy amin'ny fiadiana amin'ny areti-mandringana coronavirus izao tontolo izao, dia mitroatra kosa ny olom-pirenena ao amin'ny faritra Nertati ao Darfur afovoany, Sodàna, mitaky filaminana sy fandriampahalemana.
Tokotokony ho 3000 eo ho eo no nivory teo anoloan'ny tobin-tafika tao Nertati, ary misy ny fanohanana izany avy amin'ny tanàna sy tanànakely manodidina. Niara-dia ny komitim-pifaharana avy amin'ny tanànan'i Nyala, atsimon'i Darfur, ho any Nertati hanohana ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny sit-in.
Hatramin'ny taona 2003 farafahakeliny, malaza noho ny ady sy ny fifanandrinana mitam-piadiana ny faritra, miaritra tsi-filaminana nandritra ny taona maro teo amin'ny vondrona mpioko sy ny vondrona mitam-piadiana arabo tohanan'ny governemanta Janjaweed izay notohanan'i Omar al-Bashir nitondra tamin'izany fotoana izany. Namoizana olona mihoatra ny 300.000 ny ady tao Darfur ary nampisy fifindramonin'olona 2,7 tapitrisa farafahakeliny, ao amin'izay fariparitan'ny vondrona mandala ny zon'olombelona ho genocide na fandripaham-bahoaka.
Rehefa nidaboka tafala tamin'ny fahefana i Bashir tamin'ny avrily 2019 taorian'ny andiana fitroarana revolisionera sy fihetsiketseham-panoherana izay nitarika ny fialany, dia napetraka ny fahefana governemanta niarahan'ny miaramila sy sivily. Niahotrahotra ny kinasan-dry zareo hifampiresaka momba ny fandriampahalemana ao Darfur, ary mandraka androany, mitohy ny tsi-fandriampahalemana ao amin'ny faritra amin'ireo herisetra ifanaovan'ny fiarahamonina sy ny foko samy hafa eo amin'ny vondrona Arabo sy tsy-Arabo.
Nahazo akony teo amin'ny vahoaka sy ny manampahefana ny sit-in, raha nanangana ny farangon-teny #كلنا_نيرتتي, izay midika hoe “Nertati avokoa izahay rehetra” ny mpikatroka sodaney.
Nisioka ny mpiserasera Alaa Alhadari:
Tsy ho tapitra ny revolisiona, mandra-pivalin'ny fitakiana rehetra. Tonga ao Nertati ny diabe avy any Nyala hanohana ny sit-in ary hamaly ny fitakiana rehetra.
Isa-taona ny vahoakan'i Nertati miaritra ny fandrahonan'ny fandrobàna mitam-piadiana amin'ny voka-pambolena sy ny famonoan'ny milisy ny sivily. Miaritra herisetra ifanaovana fiarahamonina samy hafa ihany koa ny vahoaka noho ny fielezan'ny fitaovam-piadiana ao Darfur, na dia eo aza ny ezaka avy amin'ny governemanta hanaisotra ny fitaovam-piadiana eny ampela-tanan'ny sivily.
Tamin'ny Oktobra 2019, zazavavy mbola tsy ampy taona miisa roa no nanaovan'ny lehilahy mitam-piadiana maro an-keriny (fanolanana) teo akaikin'i Nertati.
Tamin'ny Janoary 2017, namono olona 10 ny milisy Janjaweed ary nandratra olona farafahakeliny 60 tamin'ny fanafihana famaizana noho ny fahafatesan'ny mpikambana ao amin'ny milisy iray tao Nertati.
Ohatra fotsiny amin'ireo mahatonga ny olom-pirenena ao amin'ny faritra Nertati hanapa-kevitra hanatontosa sit-in ireo.
Mpiserasera Sodaney maro no nanampy rakotra tamin'ny Facebook amin'ny sarontavan-dry zareo haneho fanohanana ny sit-in.
Namoaka fanambaràna nivoaka tamin'ny Twitter ny Sudanese Professionals Association (SPA) nilaza ny fanohanany feno ny sit-in sy ny zavatra takiany. Nofariparitan'ny SPA ny sit-in ao Nertati ho “riandrano vaovao izay mitondraka any amin'ny lalam-piadian'ny vahoaka sodaney.” Miteny amin'ny fahefana voaporofo ny fihetsiketseham-panoherana milamina hahazo ny zon'olombelona sy hiresaka amin'ny filàna hampitsahatra haingana ny ady sy hamaranana ny politika fanaovana ankilabao, hamaranana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny korontan'ny fivarotana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna.
Zarain'ny mpiserasera ny sarin'ny mpanao fihetsiketsehana mihazona sora-baventy manohitra ny fielezan'ny fitaovam-piadiana ao Darfur:
Tsy misy rariny rehefa tsy misy fandriampahelamana
Nandritra ny herinandro, sary maro no nivezivezy tamin'ny Twitter ahitana vahoaka maro nivory sady mazava ny fitakiana:
Olom-pirenena mihoatra ny 3000 no miditra amin'ny andro fahaefatra ipetrahany eo Nerti ao Darfur Afovoany, ary eo anoloan'ny tobin-tafika mitaky ny hampitsaharana ny fanitsakitsahana mamono ny fandriampahalemana, mitaky ny iverenan'ny nafindra toerana, ary ny fanasaziana [noho] ireo maritiora.
Nahazo fanohanana avy amin'ny maro amin'ireo manampahefana ambony ao amin'ny governemanta ny sit-in, toa ny praiminisitr'i Sodàna Dr. Abdalla Hamdok, izay nanoratra tao amin'ny Twitter:
Marina sy mendrika hovaliana ny fitakian'ny vahoakantsika ao Nertati, ao amin'ny fanjakana Darfur Afovoany. Nandefa delegasionan'ny governemanta aho hitsidika sy hihaona amin'ny mpanao fihetsiketsehana hiasa hamitana ny fitakiany hiantohana ny filaminana sy ny fahamarinan-toerana ao amin'ny faritra. Miondrika izahay mankasitraka sy manaja ny endrika sivilize ilay sit-in sy ny fitohizan'ny endrika mitaky fandriampahalemana, Andriamanitra anie hiaro an'i Sodàna sy ny vahoakan'i Sodàna.
Hatramin'ny taona 2019, niasa mafy ny governemanta tetezamitan'i Sodàna hampisy fandriampahalemana sy hampiharihary ny rariny ara-piarahamonina. Hirika ho azy ireo izao hanaporofoana ny fahamatorany amin'ny fanatrarana ireo tanjona ireo.
Talohan'ny revolisiona sodàney, tsy navela hiresaka tsikera ny governemanta ny olompirenena […]. Ankehitriny ny sit-in ao Nertati no marika Sodàna vaovao sy mamirapiratra izay nahafahan'ny olompirenena hanan-jò malalaka haneho ny ahiahiny sy hiantsoantso hitady ny rariny.